ब्लग/विचार – दाङ खबर
Aug22019 by DangkhabarNo Comments
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम : एक सिंहावलोकन
श्रीधरकुमार राजभण्डारी पृष्ठभूमि प्रदेश ५ मुलुककै विशेषयुक्त प्रदेश हो । दाङ, पूर्वी रुकुम, बर्दिया, बाँके, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, रुपन्देही, गुल्मी, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी गरी १२ जिल्लामा समेटिएको यो प्रदेशमा तराईका ६, पहाडका ५ र एउटा हिमाली जिल्ला रहेका छन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार ४४ लाख ९९ हजार २ सय ७२ को जनसंख्या रहेको यस प्रदेशमा २५ दशमलव ९ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । जसलाई ५ वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । ९५ जातजातिको बसोबास रहेको यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय रु एक हजार १२ अमेरिकी डलर रहेको छ । जसलाई आगामी ३ वर्षभित्र २ हजार पु¥याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको छ । ४ वटा उपमहानगरपालिका, ३२ वटा नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा १०९ वटा स्थानीय तह र ९८३ वटा वडाहरु रहेको यस प्रदेशको क्षेत्रफल १७ हजार ८
Jul32019 by DangkhabarNo Comments
वडालाई बजेट वितरण सन्तुलित ढंगबाट-घनश्याम पाण्डे
घनश्याम पाण्डे नगरप्रमुख-तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङ संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकार स्वतन्त्र सरकारका रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। उनीहरुले आफै नीति नियम, कानुन निर्माण गर्दै कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। केही चुनौती पनि स्थानीय सरकारमा देखिने गरेको छ। स्थानीयमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो योजना अनुसार गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकलाई नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे आभारभूत सिद्धान्तको आधारमा नगरको विकास र बजेटलाई व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन्। यसैविषयमा नगरप्रमुखसँग पत्रकार गोपाल शर्माले गरेको कुराकानी : अहिलेको बजेटको नयाँ विशेषता के हो ? स्थानीय सरकारले आफ्ना गतिविधि र योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट ल्याउनुपर्छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि सरकारकै निर्देशन अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको छ। आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा नगरको बजेट आएको छ। दीर्घकालिन रण
Jun302019 by DangkhabarNo Comments
असार १५ आज दही-चिउरा खाने दिन
अच्यूत घिमिरे/कृषिप्रधान देश नेपालमा 'मानो रोपेर मुरी उब्जाउने' बेलाका रुपमा असारलाई लिईन्छ। दबदबे खेतहरुमा पस्दै, धान रोप्दै, असारे भाका गाउदै किसानको जीविकोपार्जन र राष्ट्रकै खाद्यान्न उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउने हुनाले रोपाइँलाई महोत्सवकै रुपमा मनाउने समेत गरिएको छ। यो वर्ष मनसुनले केही ढिलाई गरेपनि देशका विभिन्न स्थानमा हिलो छ्यापाछ्याप गरेर, प्रेम र खुशीयाली बाँड्दै रोपाइँ सुरु भईसकेको छ। यही रोपाइँकै अवसरमा स्वाद र पौष्टिकता बढाएर किसानहरुमा उर्जा भर्ने आहारका रुपमा दही-चिउरा खाने प्रचलन रहेको हुनाले आजकै दिन अर्थात् असार १५ लाई 'दही-चिउरा खाने दिन' का रुपमा समेत चिनिन्छ। आउनुहोस् जानौं, दही-चिउराले स्वास्थ्यमा पार्ने केही फाइदा : आयुर्वेद चिकित्साको चरक संहिता सूत्रस्थान-२७ मा दहीको उपयोगिताको बारेमा विस्तृत रुपमा बताइएको छ। दहीको तरमा शुक्रवर्धक तत्व रहने, राम्ररी जमेको दही वात
Jun262019 by DangkhabarNo Comments
नेपालमा बढ्दै आत्महत्या
रामहरि ओझा/ नेपाली समाजमा पछिल्लो समय आत्महत्याका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । दिनहुँजसो आत्महत्याका समाचारहरु पढ्न र सुन्नु परेको छ । त्यसो त आत्महत्याका घटना नेपालमा मात्रै नभएर बिश्वभरि नै हुने गरेका छन् । बिश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार बिश्वमा प्रत्येक बर्ष करीव ८ लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन । यस आधारमा प्रत्येक ४० सेकेण्डमा एक जनाले आत्महत्या गरेको हुन्छ । नेपालमा आत्महत्या गर्नेहरुमध्ये करीव ७२ प्रतिशतले झुण्डिएर आत्महत्या गर्छन् । बिष सेवन गरेर, आफूले आफैंलाई गोली हानेर, आगो लगाएर, हामफालेर, करेण्ट लगाएर, हातहतियारको प्रयोग गरेर आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा आत्महत्यालाई हत्या भएको भन्दै मुद्दा परेका घटनाहरु छन् । यसले सामाजिक सम्वन्धमा खलल पुर्‍याउँछ । आत्महत्यालाई आफ्नो माग पूरा गराउने सौदाबाजीको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो पा
Jun92019 by DangkhabarNo Comments
गणतन्त्र संस्थागत गर्ने बेला आएको छ-सभामुख महरा
संसदीय प्रजातन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेतको राम्रो अनुभव हासिल गर्नुभएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा शालीन र भद्र नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा रोल्पा २ बाट निर्वाचित हुनुभएका महरा पछि माओवादी जनयुद्धमा सहभागी हुनुभयो । शान्ति वार्ता प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका महराले २०६३ सालयता प्रायः महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । दुवै संविधानसभामा निर्वाचित भएर संविधान निर्माणमा योगदान पु¥याउनु भएका महरा यसबीचमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत हुनुभयो । सञ्चामन्त्री हुँदा उहाँले अघि सारेको ‘हातहातमा मोबाइल सेट, घरघरमा इन्टरनेट’ को महत्वाकांक्षी नारा छोटै समयमा स्थापित भयो । यस्तै, उहाँले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । यस्तै महर
May292019 by DangkhabarNo Comments
कार्यकारीको चाहनाः प्रेस र मानवअधिकार नियन्त्रणमा
विपुल पोख्रेल/संसदमा दर्ता भएका र सरकारले तर्जुमा गर्दै गरेका केही विधेयकका मस्यौदा यतिबेला निकै चर्चामा छन् । खासगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल तथा संघसंस्था सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानले पेसागत संगठनहरूलगायत नागरिक समाजलाई आन्दोलित बनाइरहेको छ । सेना र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धितलगायत अरू थुप्रै विधेयकका प्रावधानले पनि नागरिक समाजको ध्यान खिचेको छ । सरोकारवालाहरु यस्ता विधेयक फिर्ता गर र सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेरमात्र अगाडि बढाऊ भनिरहेका छन् भने सरकारका मन्त्रीले ती विधेयकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर ‘कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने’ हठ प्रकट गरिरहेका छन् । संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाईसमेत स्वायत्त ढंगले काम गर्न नदिने र महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहेजस्तो देखिनेदेखि आर्थिक अधिकारसमेत कटौती गर्ने गरी विधेयक बनाउने काम सरकारले गरेको छ ।
May272019 by DangkhabarNo Comments
सन्दर्भ : कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवस
१. जीवन वृत्त कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ समाजवादी यर्थाथवाद अर्थात् प्रगतिवादी धाराका सशक्त कवि हुन् । साहित्यिक व्यक्तित्वबाहेक उनका सांस्कृतिक, राजनीतिक र पत्रकार व्यक्तित्व पनि छन् । महान् उद्देश्य र आस्थाका लागि एउटा स्रष्टाले कसरी आफूलाई समर्पित र बलिदान गर्न सक्छ भन्ने कुराका उनी राम्रा उदाहरण हुन् । पिता यामबहादुर सेन र माता भीमकुमारी सेनको कोखबाट वि.सं. २०१३ कार्तिक ३ गते भारतको देहरादुनमा सेनको जन्म भएको थियो । जीविकाका लागि यामबहादुर सेन भारतीय सेनामा भर्ती भएका थिए । जागिरकै सिलसिलामा उनले श्रीमती भीमकुमारीलाई पनि देहरादुन लगेका थिए । त्यहीं सेनको जन्म भएको थियो । पुख्र्यौली घर प्युठानबाट बसाइँ सरेर अर्घाखाँची जिल्लाको जलुके गा.वि.स.को सातमारामा उनको परिवार आएको हो । बाबुकै रेखदेखमा शिक्षारम्भ गरेका कृष्ण सेनले दाङको लालमटिया हाइस्कुलबाट एसएलसी पास गरे । निम्न आर्थिक अवस्थाका कारण उ
May252019 by DangkhabarNo Comments
प्रदेश ५ काे नीति तथा कार्यक्रम
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ/संविधानले व्यवस्था गरेको सातवटा प्रदेशहरूमध्ये नेपालको मध्य भागमा रहेको प्रदेश नं ५ को सरकारले पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको उक्त योजनाको आधारपत्र प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गरेको छ । आधारपत्रको आधारमा योजना पूर्ण दस्तावेजको मस्यौदा पनि सकिन लागेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेशको विकासको लागि उक्त योजना ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ । साझा कानुनहरू निर्माण नभएकोले प्रादेशिक कार्य विभाजनको स्पष्टता नभइसकेको र प्रदेशको पर्याप्त तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको स्थितिमा पनि सहभागितामूलक र अन्तरक्रियात्मक ढङ्गले योजना तर्जुमा गरिएको छ । प्रदेशका बाहै्र वटा जिल्लामा गएर स्थानीय तहहरू लगायत सरोकारवालासँगको छलफलबाट योजना तर्जुमा सम्भव हुन गयो । प्रदेशको समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारको भूमिकालाई योजनाले प्रस्ट्याएको छ
May242019 by DangkhabarNo Comments
प्रदेश ५ को नीति कार्यक्रमका विशेषताहरु
सुरेश गौतम/प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ५ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को नीति कार्यक्रम शुक्रबार प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । १६८ बुँदामा प्रदेश प्रमखले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने, पूर्वाधार,उद्योग, पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धि र दिगो विकाससंग जोड्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएकोछ । प्रदेश ५ लाई मिनि नेपालको रुपमा विकास गर्दै ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ को सोच राखेर तयार गरिएको यस नीति तथा कार्यक्रमा विशेषताहरु यस प्रकारका रहेका छन् । -आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य अनूकूल हुनेगरी उच्च आर्थिक वृद्धिपमार्फत आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोवाट समृद्धि हासिल गर्ने । तीव्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी प्रवद्र्धन गर्न लगानी सम्मेलनको आयोजन गर्ने । -आयोजना तथा कार्यक्रमको वर्गीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरी संख्याभन्दा गुणात्मक पक्षमा जोड दिने र प्रदेशको विकासका लागि वढीमा १० वटा प्र
May52019 by DangkhabarNo Comments
समृद्धिको यात्रामा लघुवित्तको पनि अहम् भुमिका रहन्छ
प्रेम सुवेदी/यतिबेला देशमा आर्थिक सबृद्धिको विषयमा निकै बहस चलेको छ । अन्य क्रान्ति पुरा भएको र अब आर्थिक क्रान्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बहस चलेको छ । अधिकांश जनता गरिवीको रेखा मुनी छन् । मुख्य पेशा कृषि छ । देशको ब्यापार घाटा दिनानु दिन बढ्दै छ । अर्काको एकोहोरो श्रमले सबृद्धिको सपना देख्नु गलत हो । देशमा हिजोको दिनमा गर्दै आएको कषि पेशा पनि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ । ब्याबस्थित परिस्कृत र आधुनिक रुपमा अगाडी बढ्नु पर्नेमा कमजोर बन्दै गएको छ । देशको मुख्य आम्दानीको श्रोत र नेपालको सम्बृद्धिको ३ खम्बा मध्येको १ खम्बा दिनानुदिन कमजोर हँुदैछ । नेपालले कृषिबाट नै सम्बृद्धि खोजेको भन्ने नारा दिने तर कृषिलाई आधुनिकीकरण र ब्याबसाइकिकरण गर्न नखोज्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरेको छ । कृषिमा अनुदान होइन , बजार ब्याबस्थापन गरिदिने हो भने उत्पादन आफै हृन्छ । नेपालमा उत्पादन भएको बेला सस्तोम